म को हुँ ? मेरो कुन क्षेत्र र विषयमा क्षमता छ ? आफ्नो रुची के छ ? तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस । - Purbeli News
म को हुँ ? मेरो कुन क्षेत्र र विषयमा क्षमता छ ? आफ्नो रुची के छ ? तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १३, २०७६ समय: २२:५१:११
लेखक क्याम्ब्रिज इष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका संस्थापक निर्देशक हुन् ।